Qarax Miino oo ka dhacay duleedka magaalada Jowhar ee gobolka Sheellaha Dhexe – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaQarax Miino oo ka dhacay duleedka magaalada Jowhar ee gobolka Sheellaha Dhexe
07/04/2018 Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Apr 7, 2018:- Ugu yaraan 3 qof ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen 4 kalena ay ku dhaawacmeen Qarax Miino oo ka dhacay Duleedka Magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe sidda ay Warbaahinta u sheegeen Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle.
Qaraxa ayaa waxaa lala eegtay ciidamo ka tirsan Militiriga dowlada Soomaaliyeed waxaana uu ka dhacay Kontoroolka Degaanka Xaanshooleey oo 4 Km Waqooyi kaga beegan Magaalada Jowhar.
Dadka dhintay 2 ka mid ah waa Ciidamada dowladda, halka qof kalena uu yahay qof Shacab.
Qaraxa waxaa uu ahaa Miino lagu Aasay wadada dhinaceeda.
Goobta uu Qaraxu ka dhacay ayaa waxaa gaaray ciidamo badan oo ka baxay Magaalada Jowhar ee gobolka Sheeballha Dhexe.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo la kulmay Safiirka dalka Turkiga